ဒီပို့စ်ကို တင်သင့် မတင်သင့် တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ တင်လိုက်တာပါ။ အခြား အကြောင်း အရာတွေက ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဒီအကြောင်းအရာက သေချာ မစဉ်းစားရင် စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေလို့ပါ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်တဲ့ သူတိုင်း မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ကာလာမသုတ် ကို နှလုံးသွင်းပါလို့ ပြောပါရစေ။အခု ကျနော်ရေးမယ့် အကြောင်းအရာက ကြည့်မိတဲ့ သူတွေအကြားမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားစေတဲ့ စကြာဝဠာ နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ YouTube video တွေအကြောင်းပါ။ အဓိက အကြောင်းအရာက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ အဲဒီ ဗွီဒီယို တွေကို Doomsday, Nibiru, Planet X, 2012 December 21 ဆိုတဲ့ keyword တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ရှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ပြောကြတဲ့ ဦးတည်ချက်က တစ်ခုတည်းပါ။ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ ပျက်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ ဘာကြောင့် ပျက်မှာလဲ။ ဘယ်လိုပျက်မှာလဲ။ သူတို့ ရေးတဲ့ အတိုင်း ကျနော် ပြန်ရေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ကျနော့် စာသား မဟုတ်ပါ။ သူတို့ ရေးထားတာကို တိုက်ရိုက်ဘာသာ ပြန်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပေရှည် နေတာတွေကို ဖျက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်)ကမ္ဘာပေါ်က အချို့ သော အကြောင်းအရာတွေဟာ ရှင်းပြ နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။ ဥပမာ - Stonehenge နဲ့ Easter Island တို့လိုပေါ့။ သေချာ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အရာတွေ အဖြစ် ယနေ့ထိ ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့ကို ဘယ်သူ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ရာနှုန်းပြည့် မပြောနိုင်ပါဘူး။ (ပုံမှာ Stonehenge နဲ့ Easter Island ပေါ်က အရုပ်တွေကို ပြထားပါတယ်။ Easter Island က သြစတေးလျ နဲ့ ချီလီ အကြားက ပစိဖိတ် ရေပြင်ကျယ် ကြီး အလယ် လောက်မှာ ရှိတာ၊ ဘယ်တုန်းက များ ရှေးဟောင်း လူတွေ ရောက်ပြီး ဒါတွေ လုပ်သွားလဲ.. ကျနော်လည်း အံ့သြော မိပါတယ်)။ ကျနော် အခုရှင်းပြမယ့် အကြောင်း အရာကလည်း သေချာ ရှင်းမပြ နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာ ကြီးပျက်မယ့် နေ့စွဲကို ပြောတာပါ။ အဲဒီ နေ့စွဲက ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အတွက် ကျနော့်လိုပဲ ခင်ဗျားလည်း အံ့အားသင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် NASA နဲ့ Governments တွေကတော့ အံ့အား သင့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီအကြောင်းကို သိနေကြ နှင့်ပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘာကို သိနေကြ တာပါလဲ။ အခုဘယ်သူတွေက ကျနော်တို့ ကမ္ဘာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြ ရအောင်ပါ။Nostradamus ကပြောပါတယ်၊ စကြာဝဠာအတွင်းက ကြီးမားလှတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာဆီကို ဦးတည်ပြီး လာနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နေပါတ်လမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ မှာ တစ်ပါတ် ပြည့်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ ဆီကို ရောက်ပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မိမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Albert Einstein က pole shift နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။ pole shifting အချိန်မှာ လူသားတွေ အပြင်းအထန် ခံစားရမယ် ဆိုတာပါ။ မာယန် ပရောဖက် တွေရဲ့ The Tzolkin ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဟာ အဆုံးသတ် အမှတ် ဖြစ်နေပါတယ်။ စက်ဝန်းကြီး တစ်ခုရဲ့ အဆုံးမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စက်ဝန်းကြီးက အစမှတ် (day 0.0.0.0.0) 11th August 3114 BC မှာ စတင်ပြီး အဆုံးမှတ် (day 13.0.0.0.0) 21st December 2012 AD မှာ ဆုံးပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ ပြည့်တိုင်း စက်ဝန်းကြီး တစ်ပါတ်လည် ပါတယ်။ holy bible ကလည်း 2012 ခုနှစ်ကို သတိပေးထားပါတယ်။ အခြားအခြား သော အရာတွေအားလုံးမှာလည်း 2012 December 21 ကို ရည်ညွှန်းထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ သေချာပေါက် ဖြစ်မှာမှန်း သိရက်နဲ့ ဘာကြောင့် နာဆာက လူတွေကို အသိမပေးတာလဲ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားတွေ အားလုံး သိသွားကြရင် လူတွေ အားလုံး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ရေး ကြိုးပမ်းကြတဲ့ အခါ သူတို့ အတွက် အခွင့် အလမ်း နည်းသွားမှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြမဲ့ အကြောင်းအရာက NASA ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ဘယ်တွေ့ရှိချက်ကို လျှို့ဝှက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာပါ။ 1982 ခုနှစ်မှာ NASA ဟာ extra solar planet တစ်ခုကို စပြီး သတိထား မိခဲ့ပါတယ်။ 1983 ခုနှစ်မှာ NASA ဟာ IRAS (Infrared Astronomical Satellite) ကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီ satellite က ဂျူပီတာဂြိုဟ်လောက် ကြီးမားတဲ့ object တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Object ကို Planet X (Nibiru) လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ planet Nibiru ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ နေရဲ့ အကြားကို ဝင်ရောက် ဖြတ်သန်း ပါမယ်။ သူ ဖြတ်သန်းမယ့် အနေ အထား ကတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီ အချက်ကြောင့် Atlantis မြို့ ကြီး နစ်မြုပ်ခဲ့သလို Noah ရဲ့ လှေကြီး တစ်ခုပဲ ရေပေါ်မှာ ရှိခဲ့တုန်းကလို အခြေ အနေမျိုး ၂၀၁၂ နောင်းပိုင်းမှာ ပြန်ဖြစ်လာပါမယ်။ ကျနော် တို့မှာ ရှောင်လွှဲစရာ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ နေစရာ ကမ္ဘာ တစ်ခုပဲ ရှိတဲ့ အတွက် မလွဲ မသွေ ရင်ဆိုင် ရပါ လိမ့်မယ်။ Stonehenge နဲ့ Easter Island အကြောင်း ကျနော်တို့ ဘာလို့ မသိ တာလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက အရင်က လူတွေ တည်ဆောက် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Nibiru ကြောင့် သူတို့အားလုံး သေဆုံး သွားတဲ့ အခါ အသစ် ဖြစ်လာတဲ့ ကျနော်တို့က မသိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Nibiru ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အနီရောင် အရာဝတ္ထု အဖြစ် သာမာန် မျက်လုံးနဲ့ မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ အပေါ်ကို တက်လာနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက် အဖျားပိုင်းတွေမှာသာ မြင်နိုင်မှာပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလလောက်မှာတော့ သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေ အားလုံးမြင်နိုင်လောက်တဲ့ အရွယ်အစား ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယမြောက် နေတစ်လုံး အဖြစ် လရဲ့ အရွယ်အစား လောက် ရှိတဲ့ သူ့ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငလျှင် အကြီးအကျယ် လှုပ်ပြီး ရေကြီးမှုတွေ နေရာ အနှံ့ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေက ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီ နေ့မှာ ကမ္ဘာဟာ Nibiru နဲ့ နေရဲ့ အကြားကို ရောက်ပါမယ်။ ဆန့်ကျင် ဆွဲငင်အားတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ pole shifting အကြီး အကျယ် ဖြစ်ပြီး အဲဒီဖြစ်ရပ်က ကမ္ဘာကို အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း စေမှာပါ။ Nibiru ဟာ ကမ္ဘာလည်ပါတ်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လားရာကို လည် နေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မျက်နှာပြင် ဆွဲငင်အား က ကမ္ဘာကြီးကို ၃ရက်တိတိ လည်ပါတ်မှု ရပ်သွားစေပါမယ်။ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ငလျှင်ကြီးတွေ လှုပ်မယ်၊ မြေပြန့်တွေ အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်း ကွဲထွက် ပြီး ကျောက်ရည်ပူတွေ တိုးထွက်မယ်၊ မီးတောင်တွေ နေရာအနှံ့ ပေါက်ကွဲမယ်၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ရာပေါင်း အနည်းငယ်သာ အသက်ရှင် ကျန်ပါမယ်။ အဲဒီနောက် ကမ္ဘာကြီးဟာ ဖြေးဖြေးချင်း အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ 2014 July 1 ရက်နေ့က စပြီး Nibiru ဟာ ကျနော် ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ဘာသက်ရောက်မှုမှ မရှိတော့ပဲ ကျနော်တို့နဲ့ ဝေးရာ စကြာဝဠာဆီကို ပြန်လည် ထွက်ခွါသွားပါလိမ့်မယ်။အပေါ်မှာ ရေးပြခဲ့တာတွေကတော့ YouTube video တွေထဲက တစ်ခုကို ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးသည် သင်္ခါရ ဆိုပေမဲ့ ၂၀၁၂ ဆိုတာ တော့ တော်တော် ကြီးများ စောလွန်း နေမလားလို့။ အခုစာလာ ဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရော.. ဒီကိစ္စကို ယုံလား။ paranormal.about.com မှာ အဲဒီ အကြောင်း pool လုပ်ထားတဲ့ result ကို အပေါ်ကပုံမှာ တွေ့နိုင် ပါတယ်။ ယုံကြည်တယ်၊ ဘာကြောင့်၊ မယုံ ကြည်ဘူး၊ ဘာကြောင့် ဆိုတာလေး comment ရေးပေး စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော့် အမြင်ကိုလည်း ပို့စ် တစ်ခုတင်ပြီး ရှင်းပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ။10/24/2008 2:35PM
မင်္ဂလာပါ ကိုခွန်းရှာဖွေတင်ပြတာ ကောင်းပါတယ်။ ထိုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်နော်တို့ စကားဝိုင်းတွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလ လောက်က ပြောဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာပျက်မည် အကြောင်းပေါ့။သိပ္ဖ္ဖံနည်းကျကျတော့ သိပ်မသိဘူး။ ဘာသာရေးကျမ်းအလာ ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုသော ကမ္ဘာ့ ကောလဟာလကြီး သုံးကြိမ် ပေါ်ပေါက်ပြီးမှ ကမ္ဘာဟာ ပျက်စီးခြင်းကို ဆိုက်ရောက်တယ်လို့ ဖတ်ဖူး ကြားဖူးပါတယ်။ကိုခွန်း တင်ပြထားတဲ့ပုံစံဆို ကမ္ဘာကြီးက လုံးလုံး ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့ မရောက်သေးဘူး ထင်တယ်။ သဘာဝဘေးကြီးတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အင်း စဉ်းစားစရာပဲ။ အကယ်ကို ဒီကမ္ဘာဖျက်ကြီးကို ကမ္ဘာအနီးသို့မရောက်ခင် မိုင်ပေါင်းများစွာ လှမ်းနိုင်တဲ့ ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ် လမ်းကြောင်းလွဲ့လို့ မရနိုင်ဘူးလား..။ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ၂၀၁၂ ဆိုတော့ ကျွန်နော်တို့ မှီပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
အဲလောက်ကြီး ကမ္ဘာပျက်တယ် ဆိုတာတော့ အဖြစ်နိုင်ပါဘူး... အသေးစားလေး တွေ လောက်ပဲဖြစ်မှာပါ... ဘာသားရေး သဘောအရဆိုရင်တော့ ကပ်ဆိုက်တယ်ပေါ့လေ.. အဲဒီအကြောင်းကိုမက်မက်လည်းဖတ်ဘူးတယ်... အခုလည်း 2012 မတိုင်ခင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ ကပ်ဆိုက်နေတာပဲလေ..တနည်းမဟုတ်တနည်း၊တခုမဟုတ်အခုနဲ့ပေါ့...ဒါဟာလည်း ကမ္ဘာပျက်ခြင်းရဲ့ တစိတ်တဒေသ ကပ်ဆိုက်တာပဲ...ဟင့်ဟင့်... ကြောက်တယ်..ကြောက်တယ်.... အခုကစပြီး ဘုရားတရား ဘက်မှာ ပိုကိုင်းရှိုင်းမယ်.. ၀ိပသနာ တရား ပိုအားထုတ်တော့မယ်...ဟိဟိဟိ.. တိဖူး..တိဖူး..တိဖူး... 2012 မှာ အနော်မပါဖူး..နော်...ဟိဟိဟိ.. :P :P :P
sait phay yar
ယု့တယ်မယုံဘူးတော့ မဆိုနိုင်သလို စင်္ကြာလောက ကြီးရဲ့ပြောင်းလည်းမူတွေက မသိနိုင်ဘူးလေဒါလည်းသပံပညာရှင်တွေတွက်ခဲ့တာတွေက တော်တော်များများလည်းမှန်ခဲ့သလို မှားခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲတာဘဲ ဆိုတော့ ဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာသလိုလက်ခံယုံပါဘဲ ကိုယ်ကဘာမှမ မတတ်နိုင် တားဆီးလို့လည်းမရ သက်တန်းကုန်တဲ့နေ့ ကုန်ကြရမယ် လေ. အဲဒါတွေစဉ်းစားပြီးကြောက်နေမဲအစား ကိုရောက်ရာနေရာ မှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီး ကျန်ရှိတဲ့ ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးနေထိုင်သွားရတာကောင်းပါတယ်
အင်မတန် ကောင်းပါတယ် ကိုခွန်းကွန်မန့်ရေးဖို့ အင်မတန် ချင့်ချိန်နေရတယ်ဒီ အကြောင်းအရာ မှာ သိပ္ပံ နဲ့ ဘာသာရေး စည်းရုံးမှု ရောထွေး ပါဝင်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်..သိပ္ပံ အချက်အလက် တွေမှာ မဆီမဆိုင်(သံသယ၀င် စရာ ဖြစ်သွား တယ်)..အဲဒါကို ကိုခွန်းသတိထားမိလားမသိဘူး...၁)Tzolkin ပြက္ခဒိန် အကြောင်းကို သမိုင်းနဲ့ အမြင် နဲ့ ရှင်းလင်းစေချင်တယ်၂)holy bible ကသတိပေး တယ်ဆိုတာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ တော်တော်လေး သံသယ ဖြစ်သွားတယ် ..ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကမ္ဘာ တည်တဲ့ အချိန် လို့ သူတို့ပြောဖူးတဲ့ BC (... ၁၀ရာစု..)ခန့်မှန်းချေ ပဲ မှတ်မိတော့တယ်...မှားရင်ပြင်ပေးပါ.)မှာ ယာဉ်ကျေးမှု မြင့်တဲ့လူတွေတောင်ပေါ်နေပြီ။ အဲဒီ အချက်ကို အမြဲ လျစ်လျူရှုပြီး သာသနာဖက်က လူတွေဟာ ၂၀၀၀မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ် လို့ တစ်လျှောက်လုံးပြောလာကြပြန်တယ်...မဟုတ်တော့လည်းဘာမှ မပြောကြပြန်ဘူး..ဒီတော့ holy bible နဲ့ သိပ္ပံ အထောက်အထား အချို့ကို ဗန်းပြပြီး မသင့်တော် တဲ့စည်းရုံးမှု ပြုမှာ ကိုစိုးရိမ်တယ်( သိပ္ပံ ကိုသတ်သတ် ထားသင့်တယ်။)အဲဒီ စာအုပ်ကို ထပ်ဖတ်ပေးပါ။ အချို့ က အကြမ်းဖက်ဖို့ စည်းရုံးတာတွေ လည်း ရှိတတ်တယ်။ (ဒီ၂ကို ခင်ဗျား ဖျက်လို့ရရင် ဖျက်ပေးပါ)၃)NASA နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး အချက်အလက် ကို ဖြေရှင်းခိုင်း တဲ့သူဟာ မုချ ရှိရပါမယ်...NASA က အရေးတယူ မဖြေရှင်း ဘူးလား...ဖြေရှင်း ခိုင်းတဲ့သူ မရှိတာလား ကို ထပ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်...၄) အချက်အလက်တွေ အားလုံး မှန်ကန် ရင်တောင်မှ.... ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ကိုဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်း မရှိတာကို မြင်သာထင်သာ ကြီး ၇ှိနေရက်နဲ့ ကမ္ဘာ ပျက်ဖို့ ကို ထပ်တလဲလဲ ပြောနေတာဟာ အင်မတန် ဆိုးတယ်။ (မုသားတစ်ဝက် အမှန်တစ်ဝက် သတင်း ဖြစ်မှာ စိုးရတယ်)၅)သာမန်လူစဉ်းစား ရင်တောင် သဘာဝဘေးတွေပဲ ဖြစ်နိုင်မှန်း ထင်ရှားနေတဲ့ အပြင် သတင်း ဆိုးတွေကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖြန်းဖြူးတတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရှိတာ ကြောင့် ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်း ဌာန တစ်ခု ရဲ့ ကြေညာ ချက် မထွက်ပေါ်မချင်း ဒီသတင်း ကို အတည်ပြု စဉ်းစားဖို့ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုခွန်း အနေနဲ့ နံပါတ် ၁၂၃၄ အချက်တွေကို ထပ်မံလေ့လာပြီး ပိုစ့် အသစ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။၅ အချက်ကိုတော့ မျက်ခြေ မပြတ်စောင့်ကြည့်နေဖို့ပါ။သိပ္ပံ ကိုလေ့လာတဲ့ အခါ ဘာသာ အစွဲကို ခဏ ဖြုတ်ထားအပ်လို့ ဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်တာကို မဆွေနွေးလိုဘူး။ကိုခွန်း ခင်ဗျား..ပိုစ့်နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကြောင့် အားနည်းနည်း စိုက်လိုက်ပါဦး..ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း..ဒီနယ်ပယ်ကို မကျွမ်းကျင်ဘူးလေ။(ဒါနဲ့ ကိုလူလ ပြောသလိုပဲ.ကမ္ဘာ လုံးလုံး ပျက်မဲ့ အနေ အထား မရှိဘူးလေ...သဘာဝဘေး တွေတော့ ကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်)အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျခင်မင်လျက်
ကိုခွမ်းကတော့ အိမ့်ကိုစိတ်ခြောက်ခြားအောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ။မသေခင်၁၀ရက်အလိုဆိုတဲ့တက်ထက်ဆိုးနေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ဖြစ်လာရင်တော့ခံရမှာပေါ့ ပြေးစရာမြေမှမရှိတာ။ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပေါ့
အလှတရား ထောက်ပြဝေဖန်သွားတာကို တော်တော်သဘောကျတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်တယ်လေသူတို့ တင်ပြထားတာက holy bible ကိုပါဆွဲထည့်ထားတော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပို့စ်လိုမှီရာလှမ်းဆွဲတဲ့သဘောတွေပါတယ်ဗျ။ stonehenge နဲ့ easter island တင်မကဘူး ဘီးမပေါ်ခင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တည်းက ပိရမစ်တွေကိုတောင် ဘယ်လိုဆောက်လည်းဆိုတာသေသေချာချာ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ နားမလည်တာတွေဆွဲထုတ်ပြလည်းနားမလည်တာပေါ်ပဲ ထပ်ဆင့်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။nasa ကမပြောတာကတော့ သူ့ကိစ္စနဲ့သူရှိမှာပေါ့ bruce willes ပါတဲ့ ကားထဲကလို အာကာသထဲအနျူမြူဗုံးလွှတ်ပြီး ခွဲဖို့ကျန်နေသလားမှမသိတာ။ :-) ပြီးတော့ ဒီမှာရေးသွားတဲ့ တခြားမောင်နှမတွေပြောသလိုပဲ ဘုရားဟောကလည်း ရှိသေးသကိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ရှောင်လို့မှမရတာ။ တွေးပူနေမယ့်အစား ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲအကြောင်းရှိတယ်ဗျ။ မဲပေးခိုင်းရင်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့မယုံဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ you tube လိုsite များက အထိမ်းအကွပ်မှ သိပ်မရှိတာကိုး။အမြင်သစ်ရအောင် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။ အမြဲတမ်းလာဖတ်နေတဲ့..........
ရှင်းပြမယ့်ပို့ စ်အသစ်ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ် ။ စိတ်ပူလို့။ :D
ခွန်းရေနင့်ပို့စ်ကို ငါ နှစ်ခါတိတိဖတ်ကြည့်တယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါက ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတနည်းတော့ ပထမတစ်ခါဖတ်တုန်းက ငါဘာမှသေချာမသိဘူး … တစ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးတော့ မှ နင့်ပို့စ်မှာပါတဲ့ ငါမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ငါ လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်တယ် …အဲ့ဒီတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးဖြစ်တယ် …ဒီက်ိစ္စကြီးကို ယုံသလားမေးရင် ငါ့မှာအဖြေမရှိဘူး … ယုံတယ် မယုံဘူးဆိုတာက မဝေးတော့တဲ့တစ်နေ့မှာ ငါတို့သိမှာပဲလေ … စောင့်ကြည့်ယုံပေါ့ …. ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ထွေထွေထူးထူး ဘာမှမခံစားရဘူး …ဖြစ်ရင်လဲ တစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ … ဖြစ်လာရင်လဲ ရှောင်လို့မှမရတာ ….သာသနာထွန်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့ ငါတို့နိုင်ငံမှာတောင် ကပ်အမျိုးမျိုးဆိုက်နေသေးတာပဲ …အဲ့ဒါမို့လို့တွေးလဲ မပူမိပါဘူး … ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ …
ဒီအကြောင်းကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ရက်ကွက်ထဲတင် ထမင်းစားဖို့ ကြံနေရတာနဲ့ အဲလို စကြာဝဠာထဲက ကိစ္စတွေဘက် မလှည့်အားတာ တော်တော် ကြာနေပီ။အစ်ကို ရေးမှပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ဒါပေမယ့် အဲလို ပျက်မှာလား ဆိုတာကိုတော့ မလန့်ဘူး။ စိတ်လဲ လုံးဝ မပူဘူး။ကျွန်တော့်အသိနဲ့ လက်လှမ်းမှီတာထက် ကျော်နေတဲ့ ကိစ္စမို့လဲပါတယ်။တစ်ခုချင်းသာ တွေးကြောက်ရကြေးဆိုရင်လဲ လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်တာတောင် မုန်တိုင်းကျဖို့ ဖြစ်စေသေးတာပဲ၊ ဘာမှကိုရစရာ မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမယ့် ကြိုက်တယ် ဖတ်ရတာကို။ဖတ်ပီးရင်လဲ ကိုယ်ပဲ အကုန်သိတာလိုလို၊ အတိအကျပဲ ဖြစ်မှာလိုလိုနဲ့ သူများကို လှန့်ရတာ ဝါသနာပါတယ် ဟီး။ဒီတော့ ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှေးဟောင်း ဆန်တဲ့ ပုံပြင် ဒဏ္ဍာရီတွေ၊ ခေတ်လွန် စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်တယ်။ဟီး ဟီး...၊ ကလေးပီပီ ဟန်ချီချီပဲ။များများတင်ပါဦး၊ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဖတ်စရာနေရာလေးတွေလဲ လမ်းညွှန်ပါဦး။
အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်.. ယုံကြည်တယ် မယုံကြည်ဖူး ဆိုတာကတော့ သေသေချာချာတော့ မသိသေးပါဘူး.. နောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက တချို့website တွေမှာဆို countdown တောင်လုပ်နေကြတယ်.. ကမ္ဘာပျက်ဖို့ ဘယ်နရက် ဘယ်နနာရီ ဘယ်နမိနစ် ဘယ်နစက္ကန့် ဆိုပြီးတော့.. အကိုလူလ ပြောသွားသလိုဘဲ ၂၀၁၂ ဆိုမှီတယ်.. စောင့်ကြည့်ချင်တယ်
ကိုခွန်း ... နေကောင်းတယ်နော် ....
တကယ်ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာထက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးကတော့အမှန်ပါပဲဒီလို ရှာဖွေရေးပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူငယ်တွေကြားမှာတော့ ဒီကိစ္စလေးဟာ အငြင်းပွားဖွယ်လေးပါ..ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမရဆိုရင် ဖြစ်မယ်၊ပျက်မယ်ပေါ့.ပျက်မယ်ဆိုတာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးမှာပါ..၂၀၁၂မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာမှာတောင်နာဂစ်ကြောင့်ပျက်နေသလို ဗီယက်နမ်၊တရုတ် ကျွန်နော်တို့ အိမ်နီးချင်းတွေမှာတောင်နည်းနည်းနဲ့ ပျက်စီးနေကြပါတယ်တကယ်ပျက်မယ်ဆိုရင်သဘာဝဘေးအန္တ၇ယ်တွေကြောင့်ပျက်စီးကြမှာပါပဲပို့စ်လေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ အားပေးလျက်
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ မယုံနိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနက်ဖြန်ဆိုတာတောင် မယုံနိုင်စရာ အကြောင်း၇ှိနေလို့ပါ..ကမ္ဘာပျက် မယ့်အကြောင်း စုံလင်စွာ သိရှိလိုပါက မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားထားသော စက္က၀တ္တိသုတ် မှာရှင်းလင်းစွား မှတ်သား နားယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ့်ဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန်တာလွဲလို့ အကျိုးရလာမည့် မဟုတ်ဟု ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
သူရိန် ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ တကယ့်ဖြစ်မယ့်နေ့မရောက်ခင်မှာ အရာဝတ္ထုကိုအရင် တွေ့ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒိတော့ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်အတိုင်းအတာထိမြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ပြောထားတဲ့အတွက်စောင့်တော့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဗျာ။အဓိကပြောချင်တာကတော့ ယခုလိုထွန်းကားနေတဲ့သိပံခေတ်ကြီးမှာ အဲ့ဒိ အရာကို ဒုံးကျဉ်လိုမိူး လက်နက်တစ်ခု နဲ့ ပစ်ပြီးဖြိုခွင်းလို့ရောမရနိုင်ဘူးလား ?နောက်တစ်ခု က ပစ်ခွင်းဖျက်စီးလို့မ၇လောက်အောင်ကို မားနေမယ်ဆိုရင် projectile အပုဒ်စာများတွက်ချက်မှုများနဲ့ဆက်စပ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အရာဝတ္ထုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ရောလုပ်ကြည့်ယူလို့မ၇ဘူးလား?
မင်္ဂလာပါ ကိုခွန်း တင်ပြထားတာက ဖြစ်နိူင်မဖြစ်နိူင်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးပြောပြချင်လို့ပါ။လူဆိုတာသေရမှာကို တော့ကြောက်ကျတာချည်းပဲလေ။ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူဆိုရင် ပိုဆိုးသေးတယ်။ဒီကိစ္စက တကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကျော်မီလျံနာ သူဌေးကြီးတွေက သူတို့ပုန်းဖို့ ရှောင်ဖို့ နေရာလုပ်နေကျရောပေါ့။၂၀၁၂ ဆိုတာလိုမှ မလိုတော့တာ။အဲလိုလုပ်ပြီဆိုရင် မီဒီယာတွေက လဲအတိအလင်းဖော်ပြကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကရော ဘာဖြစ်လို့အခုချိန်အထိ ဘာမှမလုပ်သေးတာလဲ။ တကယ်ဖြစ်လာတော့မယ်တာသေချာရင် အင်အားကြီးနိူင်ငံတွေ ပေါင်းပြီး တစ်ခုခုတော့ လုပ်မယ်လို့ထင်တာပဲ။ တတ်စွမ်းသရွေ့လေးပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... တကယ်ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေ တကယ်ဖြစ်မလာဘူးဖြစ်စေ ကမ္ဘာကတော့ပျက်စီးမသွားဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်က သတ္တဝါတွေဟာ တစ်နေ့တခြား လောဘ ဒေါသတွေ တိုးနေကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခပေါင်းစုံဟာ ကမ္ဘာနေရာပေါင်းစုံမှာ ကျရောက်နေတာကို သိရှိကြမှာပါ ။ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတောင် အရွယ်မရောက်ပဲ သေကြေရသေးတာပဲဗျာ ။ သင်္ခါရကတော့ရှောင်လို့မရပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးတဲ့ အထိတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဗုဒ္ဓဟောကြားပြီးသားပါ ။ အဲ အခုလိုနေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကပ်တွေဟာ လူတွေလောဘ ဒေါသ တွေအားကြီးလာလို့ပါ ။ ဘေးအန္တရာယ်တွေက ရှောင်လွဲချင်ရင်တော လူတိုင်းက လောဘ ဒေါသ တွေ ကင်းအောင်နေပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘေးမှမကျရောက်ပါဘူးဗျာ ။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ အစမ်းသပ်ခံနိုင်တဲ့ ဘာသာတရားပါ ။ဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့ အကာအကွယ်ပဲဗျို့ ............................................
မင်းတို့ဗုဒ္ဓကတော်တော်စွမ်းတဲ့ပုံပဲနော် ဒါပေမယ့်သူများတွေဘုရားလိုပြန်ရှင်သန်ထမြောက်တဲ့နေ့တွေဘာတွေရှိပုံ မပေါ်ဘူး မင်းတို့အရိမေတ္တယ ကရောဘယ်တော့လာမှာလဲ အဆက်အသွယ်ရှိရင်ပြောလိုက်အုံး အမှီလာပါတော့လို့ဒါမှမဟုတ်လဲမြန်မြန်တရားကျင့်ခိုင်းလိုက်ကွာငါကြည့်ရတာအခုခေတ်လူတွေဘုန်းကြီးတွေတရားကျင့်ပုံမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
သိပ္ပံပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပိုစ့်မှာ ဘာသာရေးလာတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ အပေါ်ကလူကရှိသေး.. ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. ကိုယ်မယုံတာနဲ့ ဘာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကို ဘာမှ လာထိခိုက်နေစရာကိုမလိုဘူး.. ငါတို့လဲငါတို့ယုံကြည်မှုနဲ့ငါ.. ပြောရရင် သေပြီးမှ ပြန်လည်ရှင်သန်တယ်ဆိုတာကရော ဘယ်လောက် အခြေအမြစ်ရှိလဲ.. ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကရော.. တော်ပါပြီ.. off topic ဖြစ်နေပြီ.. ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အငြင်းအခုန်လဲမဖြစ်ချင်ဘူး.. ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားလဲ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. ကျုပ်လဲယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေမယ်.. ဘယ်သူမှမထိခိုက်ကြနဲ့.. ပိုစ့်က ကမ္ဘာပျက်မှာမဟုတ်ပဲ.. ကပ်ဆိုက်ယုံလောက်ပါပဲ.. ယုံတော့မယုံဘူး. ဒါပေမဲ့ ဖြစ်လာတော့လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး..ခုလို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ကိုခွန်းကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဟေ့ကောင် Min မင်းတို့ဘာသာကရှင်သန်ထမြောက်တယ်ဟုတ်လား နွားတင်းဂုတ်မှာမွေးပြီးလူဖြစ်လာတဲ့ကောင်ကို လှံနဲ့ထိုးသတ်ပြီးကျက်သရေမရှိသေတဲ့ကောင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်ကများကွာ ခွေးစကားကနတ်စကားမထွက်နဲ့ မင်းတို့ရှင်သန်ထမြောက်တယ်ဟလား ကောင်းကင်ဘုံတဲ့ ဟားဟား လူဆိုတာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှယုံရတယ်ကွ မင်းကခွေးမို့လို့ သူများပြောတာမျက်စိမှိတ်ယုံတာ ပါးစပ်သနတယ်ကွာ ဒီခွေးကိုဂရုစိုက်မနေကြနဲ့
အေး မင်းမယုံရင် မယုံသလိုနေ ဘာမှသူများဘာသာရေးကိုထိခိုက်နေစရာမလိုဘူး ဟေ့ကောင် ငါတို.ဘာသာက မင်းတို.လို သူများတွေယုံကြည်အောင် လိုက်ဆွဲဆောင်ဟောပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ငါတို.ဘုရားကရှင်းတယ် သူ.ကိုယုံကြည်မှကိုးကွယ်ဒါပဲအဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်
ကိုခွန်းကိုတော့အားနာပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ပြောပါရစေဗျာ။ဟေ့ကောင်(min)မင်းတို့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူစော်ကားနေလို့လဲ။ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုင်တာကိုပဲပြောပါ။မဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုလာမစော်ကားနဲ့မင်းထက်ပိုပြီးပြောတတ်တယ်။အေးငါတို့ပါးစပ်ကမင်းလိုစော်ကားတဲ့စကားမျိုးပြောမထွက်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်မင်းဒီထက်ဆိုးလာရင် ငါတို့ အဆိုးမဆိုးနဲ့။(လူမိုက်လေးများအဖွဲ့)
ကျနော့်ဆီမှာ ဒီပို့စ်ကို ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြထားပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါ။
အမယ်လေးဗျာ နိုင်ငံ ခြားသားတွေများ မြန်မာစာ ဖတ်လို့ တတ် ပီး ဒီpost တွေကိုဖတ်ဖြစ်သွား ရင် တော့ မြန်မာတွေ ကိုတော်တော် အထင်သေးသွားဖို့ ရှိတယ်ထင်တယ် ဗျာဘာသာရေး တိုက်ခိုက်တာတွေရော တယောက်က လဲ မြန်မာတွေ တွေးခေါ်တာ သူများတွေ ထက်သာတယ် တဲ့အဲဒါ တွေက တကယ်ဆိုရင် ရေတွင်းထဲက ဖားလိုဖြစ်နေဘီ ဗျ မဖြစ်သင့် ဘူး တကယ့်သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ ကိုမြောင်းထဲ ပို့ ရာ ရောက်သွားမှာပေါ့ နော် ၊ တကယ်တော့ မနက် ဖြန်မှာ ဘာဖြစ် မလဲ ဆိုတာ လူ (Any Kind of Human) တွေ ဘယ်လိုမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဘာဖြစ် ဖြစ် ရင် ဆိုင် ရမှာ က လူတွေ ရဲ့ တာဝန်ပဲ မဟုတ်လားဗျာ
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ free hosting လေး က တော်တော်လေး ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ အောက်က လင့်လေးမှာ sign up လုပ်လို့ ရပါတယ်။ http://www.000webhost.com/ 350 MB disk space ပေးပြီး data transfer 100 GB ရတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်သုံးသလောက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ wordpress နဲ့ joomla! စတာတွေကို သုံးချင်တဲ့ သူတွေကို စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ကြော်ညာတောင် မထည့်တဲ့ ဆိုဒ်ဆိုတော့ သုံးရတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
Copyright 2009 Myanmar Astronomy
Blogger theme by BloggerThemes | Blogger Templates | Cash Back Credit Cards | Design by ChocoTemplates SEO by: Templates Block